Amathiphu Kusuka ku-Semalt On Indlela Yokuvimba Amathekisthi, Ama-imeyili Angadingeki, Nezingcingo Zefoni
uMax Bell, i- Semalt iMenenja yokuphumelela kwamakhasimende, ithi imibhalo enobumbano, ama-imeyili angafuneki, kanye namakholi wokukhangisa ecasulayo angabhubhisa ngokushesha kusihlwa sakho. Ngonyaka odlule, uKhomishinari Wezokwazisa wafaka imibhalo engaphezu kuka-114 000 engaceliwe kanye nezingcingo ezicasulayo. Kodwa inani kulindeleke ukuthi lingene ezigidini ngenxa yokunyuka kwama-spammeri ku-inthanethi. Okuhlangenwe nakho kokususa imilayezo yombumbulu kanye nama-imeyili angenalutho kusuka ku-akhawunti yakho akusikhathi nje kuphela sokudla kodwa futhi kuyabiza.
Ukuvimbela kanjani imibhalo engadingeki
Ingabe uke wathola imibhalo ye-bombarding kusuka ku-spammers? Ayikho indawo yokwesaba! Uma ngabe uthola imibhalo evela kubahlaseli, njengabaphathi besimangalo se-Payment Protection (PPI), kufanele ucabange ukubika le ndaba kumhlinzeki wenethiwekhi yakho ukuthola ezinye iziqondiso. Inombolo enhle yabahlinzeki benethiwekhi inikezela amakhasimende angakhona mahhala izindlela zokuvimba abagaxekile ukuba bangabathukutheleli. Ukubika imibhalo enonya, ithumela umbhalo ongafuneki kuya ku-7726 futhi ufake inombolo evumelekile yomthumeli. Amanethiwekhi amakhulu aye phambili ekuvikeleni amakhasimende ekuhlukunyezwa ngabagaxekile nabaduni. Izinqubomgomo nezindinganiso zilawula ukuthi abahlinzeki benethiwekhi kanye nezinkampani zisebenzisa kanjani. Njengomsebenzisi weselula, unganquma ukubika noma ukufaka isikhalazo ku-Office Commissioners Office. Izinkampani eziye zaphuka izimo zenkontileka ziphela ukukhokha imali engaphezulu kwama £ 500,000. Muva nje, inkampani yesikweletu esebenza eBradford iphelile ukuchitha imali engu-£ 80,000 ngemuva kokuthumela izigidi zemibhalo ecasulayo phakathi nezinyanga eziyisithupha zokugcina.
Ungavimbela kanjani izingcingo ezicasulayo?
Isevisi Yokuthandwa Kwefoni (TPS) iye yaba usizo olukhulu kubasebenzisi beselula abathola izingcingo zokumaketha ezicasulayo ezivela kugaxekile. Ukumisa izingcingo ezivela kuma-strategists ezentengiso nezokuthengisa, bhalisa inombolo yakho yomsebenzisi yeselula ngenkonzo yezintandokazi zocingo. Izinkampani azisekho igunya lokukubiza uma ubhalisa ne-TPS inhlangano. Ukuze ubhalise ngale nsizakalo, thumela i- "TPS" ihambisane nekheli lakho le-imeyili ku-85095. Ngemizuzwana embalwa, uzothola isiqiniseko sombhalo kusuka ku-Telephone Preference Service eqinisekisa ukuthi ungeziwe ku-database. Ezinye izinkampani zocingo nazo zinikeza ngamasevisi ukusiza ukuvimbela izingcingo zokucindezeleka. Noma kunjalo, amacala angase ahluke kuye ngokufaka umkhiqizo wokuvimbela ucingo.
Ungavimbela kanjani ama-imeyli ogaxekile?
Ukuthola ama-imeyili angafuneki kusuka ku-spammers nsuku zonke kungaba nomsindo. Ukunyuka kwama spammeri ku-inthanethi kuye kwanda njengoba isikhathi sihamba. Abakwa-Spammers basebenzisa ama-imeyili angenalutho ukuthola idatha yomsebenzisi wokugcina. Njengomsebenzisi wefoni ephathekayo, gwema ukuchofoza nokuvula ama-imeyili avela kusizinda esingenamkhawulo. U-Spammer uthola isaziso uma uvula isixhumanisi esithunyelwe ku-akhawunti yakho ye-imeyili. Sebenzisa inkinobho 'yokuzikhishwa ohlwini' ukuze uvimbele ama-imeyili angafuneki ukuba ungene ebhokisini lakho lokungenayo. Uma ngabe uthola ama-imeyili avamile kusuka kumakheli athile e-imeyili, ukuvimbela amakheli we-imeyili kungukudutshulwa okuhle kakhulu okumele uthathe. Ukuvimbela ikheli kuqinisekisa ama-imeyili alandelayo avela kumakheli e-imeyili avinjelwe ukuya kufolda yogaxekile.
Ukugcina uhlelo lwakho lokulwa nesandulela ngculazi lube lukhulu kakhulu uma kuziwa ekuvikelekeni kwefoni yakho. Ungavumeli izingcingo, izingcaphuno ezingamanga, nama-imeyili angafuneki ukuchitha ubusuku bakho. Sebenzisa amacebo namathiphu okugqanyisiwe ngenhla okumele abe ohlangothini oluphephile.